Tartanki Wiki ee Milyan Dollar ee John Chow dot Com | Martech Zone
Tartanki Wiki ee Milyan Dollar ee John Chow dot Com
Monday, August 13, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
John Chow dot Com ayaa haya shar kale tartanka blog. Wuxuu siinayaa 24 ″ shaashad ballaaran oo shaashad LCD ah iyo nuqul la saxiixay oo ah buugga iibinta ugu fiican, The 4-Hour Workweek! Raadi sida loo galo halkan. Tartankan waxaa maalgalinaya Wiki-ka Milyanka Dollar ah. Adeegso lambarka kuuboon ee JohnChow si aad ugu kaydiso $ 10 bog.
Caawa waxaan iibsaday bogga "Email"… Waan la yaabay inuu furan yahay! Waxaan dhaawacay bixinta $ 100 doolar ee bogga maxaa yeelay waxaan ilaaway inaan galo lambarka kuuboon. Waxaan u qoray iibiyeyaasha waxaanan u sheegay inaanan rabin $ 10, laakiin waxaan rabaa wixii dheeri ah ee ku jira tartanka John !!!
In ka badan $ 9,000 bishii Luulyo!
Xusuusin John Chow: Bishii hore ayaan sameeyay $ 3,300 on balooggan mahadsanid taladiina oo mid kale ku dar $ 6,000 qandaraasyada horumarinta ee aan toos ugu tilmaami karo boggeyga. $ 2,700 oo ka mid ah $ 3,300 waxay ahayd 'shar' laakiin waxay ka caawisay bixinta wiilkayga baabuurkiisa dayactirka iyo kombuyuutarka markuu ku sii jeeday jaamacadda Mahadsanid, John!
Email ROI: Ma Jirto Maskax Shirkad Weyn
Wax Yar Oo Aan Daawado, Waxyaalaha Wanaagsan Ayaa Helaya!
Agoosto 13, 2007 saacaddu markay ahayd 10:52 PM
Waxaan hubaa inaan jeclaan lahaa inaan jaleeco waxa cadaab ee aan qaldanaa markii ay timaaddo dibigan AdSense .. Nasiib ayaan leeyahay haddii aan xitaa ku dhowaado 50cents maalintii .. badanaa waa zilch
Aug 14, 2007 at 7: 34 AM
Google si fiican ugama qabanayso boggeyga. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isku daydo inaad qaabeyso xayeysiiska si ay ula socdaan waxyaabahaaga halkii aad ka heli lahayd midabbo iyo xuduudo kala duwan
Ma xasuusan karo halka aan ka aqriyay laakiin dadku aad ayey ugu habboon yihiin gujintooda haddii aysan u maleyneynin inay tahay xayeysiin cad. Taasi waa sababta xayeysiisyada qoraalka ah ay inta badan leeyihiin qasabno ka badan xayeysiisyada muuqaalka ah.
Sidoo kale - kani wuxuu ahaa BIG, wixii caadi ah, bishii. Waxaan jeclaan lahaa inay caadi noqoto!
Hoyga Million dollar
Aug 16, 2007 at 10: 29 AM
Xaqiiqdii waxaan helay boggaaga halka aan ka baarayo wax ku saabsan Milyan Dollar Wiki. Kadib waxaan ku qoray rukunkaaga;)
MDW waa talaabo ka sareysa MDHP marka la eego bixinta dalab kafiican iyo waliba qiime ahaan. Waxaan u maleynayaa in buuqa bilowga ah iyo dhawaqii dhawaa ee ka yimid John Chow uu kor u qaadi doono degelkan iftiiminta ku filan si uu ugu oggolaado inuu ku koco dardartiisa.
Aug 16, 2007 at 11: 41 AM
Waan ku faraxsanahay inaan halkaan ku haysto! Waan kugu raacsanahay si qalbi furan fikradda iyo fulinta!
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga waana ku faraxsanahay inaad diiwaangelisay!